Sida loo dhageysto raadiyaha iphone, iPad iyo HomePod | Wararka IPhone
Imaatinka macruufka 13, waxyaabo badan ayaa iska badalay nidaamyada ka shaqeeya iPhone iyo iPad, midkoodna waa wax waxtar weyn u leh kuweena ku raaxeysanaya dhageysiga raadiyaha iyagoo qabanaya hawl kale. Hadda waa suurtagal in la dhageysto saldhigga aad jeceshahay, xitaa kan maxalliga ah, oo nool iyo iyada oo aan loo baahnayn in la adeegsado codsi dhinac saddexaad ah.
Isla barnaamijka Apple Music gudaheeda ayaan mar horeba ku heli karnaa idaacad kasta oo maxalli ah, laakiin isdhexgalkaan weli xoogaa waa "cagaar" mana ahan wax gebi ahaanba fudud in sidaas la sameeyo, sidaa darteed Waxaan sameynay fiidiyoow aan ku sharaxeyno tabaha yar yar ee aan ku dhageysan karno raadiyaha adoo adeegsanaya Apple Music on your iPhone, iPad, iyo xitaa HomePod.
Waxa ugu horreeya ee la hubiyo ka hor intaadan bilaabin ayaa ah inaad haysatid iPhone ama iPad aad ku cusbooneysiisay nooca ugu dambeeya ee la heli karo. Hadday sidaas tahay, markaa waad furi kartaa barnaamijkaaga Apple Music oo waxaad aadi kartaa tabka "Raadiye". Halkaas waxaad ku arki doontaa idaacadaha Apple Music ee Apple abuurtay (Beats 1 iyo wixii la mid ah) laakiin haddii aad hoos u rogto Waxaad arki doontaa qaybta "Baahinta" halka ay saldhigyada caadiga ahi ka soo muuqan doonaan. 40, ugu badnaan FM, Chain 100… Ma yihiin qaar ka mid ah idaacadaha aad ku arki karto qaybtaan, laakiin iyagu ma aha kuwa keliya ee shaqeeya. In kasta oo aysan muuqan, waxaad dhageysan kartaa ficil ahaan idaacad kasta oo aad qiyaasi karto.
Sideen u dhageystaa idaacad aan ka muuqan qaybtaan? Haddii aad isticmaasho mashiinka raadinta Apple Music, ku siin maayo natiijooyin (xiiso leh maxaa yeelay Betas-kii hore way ka muuqdeen), laakiin waxaa jira xal ka fudud oo ka toosan: weydii Siri. U sheeg Siri idaacadda aad rabto inaad dhageysato isla markaana ay isla markiiba ciyaarayso. Sideen ku weydiiyaa? Taladaydu waxay tahay inaan dhaho "Waxaan rabaa inaan dhageysto raadiyaha ..." ka dibna idaacadda, iyo haddii aad rabto inay ahaato mid maxalli ah, laga bilaabo magaalada aad rabto. Haddii aadan dhihin erayga "radio" waxaa laga yaabaa inaad ku ciyaareyso podcast, ama liiska muusikada ee Apple Music. Tilmaamahan oo kale waxaad ku dhageysan kartaa raadiyahaaga HomePod, oo ah wax inbadan oo idinka mid ahi ay sugayeen muddo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Sida loo dhageysto raadiyaha adiga oo isticmaalaya iPhone-gaaga, iPad-ka, iyo HomePod
Hagaag, ma helayo qaybta baahinta ...
Iyo ka warran kuwa aan ku haysan muusigga Apple waddankeena ... Xaaladdayda waxaan ku qasbanaaday inaan iska diiwaangaliyo shirkadda 'Spotify' sababa la soo sheegay awgeed .... Waan jeclahay Apple, laakiin mararka qaarkood, siyaasadaha qaarkood ... Pfff. uraya
Wuxuu ii soo diray ogeysiiska si aan ugu dhaqaajiyo xogta gacanta ee Apple Music ._.
Ma fahmin sababta aan ugu sheegayo siri raadiyeyaasha aan doonayo inaan dhageysto, ma shaqeyneyso inaan ka raadiyo baarka raadinta muusikada, oo aad u wareersan.
Kiiskeyga waxaan ku ogaaday natiijada ka soo baxda idaacadaha ku jira arjiga hooyo mudo daqiiqado ah, daadad badan oo ku dhaca batteriga ka dib isticmaalka, la tashiga goobaha, barnaamijku wuxuu cunay 77% muddo 4 saacadood ah., haysashada cusbooneysiinta naafada ah ee asalka.
Waan sii wadi doonaa, hada, codsiyada kale.
Ka saarista dhibaatada ee barnaamij ka socota Hong Kong